Gịnị bụ ihe eji azacha mmiri na gịnị ka ọ bụ? Uru na ọghọm | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Ihe nhicha mmiri
Portillo nke German | | Omenala ulo
Kingụ mmiri si na mgbata abụghị mgbe kacha mma. Ọ bụghị n'ihi na mmiri anaghị a drinkụ, dị anya na ya, kama ọ bụ n'ihi na mmiri ahụ nwere ike ịkarịbiga nnu dị ka nzu. Enwere ike imetụta akụrụ anyị n'ime afọ ndị a karịa nke wayo na, yabụ, anyị na-eweta taa ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ihe nhicha mmiri. Anyị ga-agwa gị uru na ọghọm niile nke ngwaọrụ ndị a nwere na otu ha si arụ ọrụ.
Chọrọ ịmatakwu banyere ihe nhicha mmiri? Nọgide na-agụ ihe.
1 Kedu ihe ọ bụ na gịnị ka ọ bụ maka
3 Isi ọghọm
4 Mmezi na ntinye ihe nhicha mmiri
Kedu ihe ọ bụ na gịnị ka ọ bụ maka
Ọ bụghị naanị nnu karịrị nwere ike ịbata na mmiri, kamakwa ụfọdụ microorganisms na nje nwere ike ibute nsogbu ahụike ụfọdụ. Enwere ike iji ihe nhicha mmiri kpochaa adịghị ọcha ndị a. Ọ bụ ngwaọrụ bụ ọrụ maka ihicha mmiri nke na-esi n’olulu mmiri apụta ka ọ ghara ịdị ọcha mgbe anyị gara ị toụ ya.
Ọ bụ ezie na mmiri a na-a isụ, anyị nwere ike ịhụ ịdị adị nke ihe ụfọdụ na-emerụ ahụ na ya. Maka ihe a niile, e nwere ihe nhicha mmiri. Ihe niile anyị nwere ike ịchọta taa nwere teknụzụ dị elu nke dabere na iji nzacha carbon na-arụ ọrụ na ụfọdụ mpempe nkewa. E nwekwara ndị toro eto karịa ndị na-eji microfiltration eme osmosis. Guysmụ okorobịa a bụ ndị kachasị ọkaibe.
Enwere ike ime ka mmiri ọ Dụ Dụ dị nro site na sistemụ ndị a dị ọcha. N'ozuzu, a ga-ekpochapụ ha n'oge ọrụ nke usoro mmiri na ụlọ ọrụ na-eweta, ma 100% enweghị ezigbo microbiological, kemịkalụ na anụ ahụ mmadụ enweghị ike ijide n'aka mgbe niile.
A na-etinye ndị na-eme ka a dị ọcha kpọmkwem na mgbata ma ọ bụ na akpa na kichin. Ndị a na-ehicha ihe nwere ihe nzacha dị iche iche nwere ike ihicha mmiri nke microorganisms na nje bacteria iji wepu unyi niile ma ọ bụ ihe achọghị. Ya mere, ọ bara ezigbo uru itinye ebe mmiri mmiri dịtụ ntakịrị. N'ụzọ dị otú a, anyị ga-ahụ na anyị na-a waterụ ezigbo mmiri.
E nwere ụdị dị iche iche dịka ha si dị mgbagwoju anya. Ihe kachasị zuru ezu bụ ndị chọrọ nrụnye n'ụlọ niile yana nke kachasị dị nza na-esote mgbata. Typesdị abụọ ahụ na-arụ otu ọrụ, mana n'ọtụtụ ọkwa dị irè.
Otu n'ime uru ndị anyị na-ahụ mgbe ị na-ehicha ihe anyị nwere:
Na-a pureụ mmiri dị ọcha. Nke a dị mkpa karịsịa na obodo ebe mmiri adịghị mma. Iji hụ na anyị na-a pureụ mmiri dị ọcha mgbe niile, anyị ga-enyocha ihe nzacha site n'oge ruo n'oge ma gbanwee ha mgbe niile. Ọ bụrụ na emeghị nke a n'oge, a ga-echekwa ógbè nje.
Na-ebelata ihe ize ndụ nke ọrịa. Site na ịghara ị waterụ mmiri na nje bacteria na microorganisms ndị ọzọ, anyị na-ebelata ihe gbasara nke puru ịrịa ọrịa site na mmiri ọ drinkingụ drinkingụ n'ọnọdụ dara ogbenye.
Womenmụ nwanyị dị ime na ụmụaka ga-a drinkụ ahụike. N'oge nke afọ ime na mgbe anyị dị obere ọ dị mkpa iji nlezianya lekọta ihe anyị na-eri. Ahụ anyị abụghị nke ọma na iwepu nje bacteria na-emerụ ahụ n’ahụ, yabụ ị ga-enye ya obere enyemaka.
Ha na-etinye mfe. Ọ gwụla ma anyị chọrọ nchacha mmiri n'ọtụtụ buru ibu n'ụlọ niile, ihe nzacha ndị na-adịkarị mfe iji wụnye. Ha anaghị achọ nlekọta dị ukwuu, belụsọ maka nza nza na-agbanwe oge ọ bụla.
Save na-echekwa ego na mbọ. N'ime okwu na ogologo oge ọ dị mma ma nwee akụ na ụba ebe ọ dị ọnụ ala karịa ịkwụsị ịzụ mmiri mmiri. To ga-ebu ụzọ tinye ego, mana ka oge na-aga, ị ga-echekwa, ebe ọ bụ na mmiri e tere mmanụ na-ada ọnụ karịa.
Mma uto nke mmiri. Maka mmiri ndị ahụ na-atọ ụtọ, ihe nzacha a na-ewepụ ụtọ ndị ahụ.
Enyemaka gburugburu ebe obibi. Ọ bụrụ na ị na-eji nzacha ndị a ma zere mmiri mmiri mmiri, anyị ga-ebelata nsị plastik na gburugburu ebe obibi (lee Ntughari nke karama plastic).
Nwere ike ịhọrọ nzacha nke kacha dị mma maka gị. E nwere ụdị dị iche iche na nke ọ bụla dabara nke ọma ma ọ bụ ka njọ na ọchịchọ ahụ.
Agbanyeghi na mmiri a na - eme ka mmiri dị ọcha bụ nnukwu nhọrọ iji drinkụọ mmiri na ọnọdụ dị mma yana uru ya karịrị ọghọm ya, anyị ga - akpọ aha ha ka ha gosipụta ihe niile anyị nwere.
A ghaghị idobe ha n'ọnọdụ dị mma. Ihe nzacha a na - ejigide nje na ụmụ irighiri ihe dị n’ime ha iji gbochie ya ịgafe mmiri. Nke a bụ ihe na-eme ka ọ dị mkpa ka a gbanwee ha site n’oge ruo n’oge iji gbochie anyị ị consumụ mmiri emetọ ọzọ. Ọ bụrụ na arụzighi oke ọfụma, anyị ga - eme ka ịdị adị nke ezigbo broth ga - agbasa na mmiri anyị. Site na ihicha ya, ị nwere ike ị nweta ọtụtụ ụdị nje bacteria karịa mmiri a na-asachapụghị.
Ego izizi. Ihe nhicha mmiri na-achọ nkwụnye ego mbụ iji wụnye. Agbanyeghị na enwere ike idozi ọghọm a mgbe anyị hụrụ na ọnụ ahịa ezinụlọ na mmiri mmiri bụ euro 500 kwa afọ.
Enwere ụfọdụ usoro ịdị ọcha ha na-akarị akarị na mkpa karịa ịgbanwe nza ọtụtụ ugboro n'afọ. Ọ kachasị mma ịwụnye nke kwesịrị ịgbanwe naanị otu ugboro n'afọ.
Mmezi na ntinye ihe nhicha mmiri
Dị ka anyị hụworo, iji ihe nzacha ndị a eme ihe dị mkpa dị ka mmiri ọ drinkingụ inụ n'ọnọdụ dị mma. Ya mere, anyị ga-agwa gị gbasara isi mkpa mmezi nke ndị ọcha a.
Isi mmezi ọ na-agbada ịgbanwe katrij mgbe achọrọ ya. Iji mee nke a, anyị ga-agbaso ntuziaka nke onye nrụpụta, ọ bụ ezie na ọ ga-ekwe omume na dabere na ojiji anyị na-enye ya, anyị ga-agbanwe ya ọtụtụ mgbe. Nlekọta a bụ obere ihe iji tụnyere uru niile ngwaọrụ a na-enye anyị.
Iji wụnye ha naanị anyị ga-ebipụ mmiri mmiri ma mepee ọkpọkọ ka mmiri fọdụrụ gbapụ. Mgbe ahụ, anyị ga-ejikọta ihe nkwụnye ọkụ na mgbata na akpa akpa. Enwere ike itinye akpa ahụ ma tinye ya n'ụzọ dị iche iche. A ga-etinye usoro ndị a n'ọrụ ma jiri ya mee ihe, yabụ na anyị agaghị achọ enyemaka nke onye ọ bụla plọmba.
Enwere m olileanya na site na ndụmọdụ ndị a ị nwere ike iji ihe nhicha mmiri n'ụlọ ma rite uru na uru ya niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Nchekwa ike » Omenala ulo » Ihe nhicha mmiri
Aaron Musk dijo
Ndewo, enwere m nzacha mmiri 5-stage. Nlekọta abụghị nnukwu ihe, a ga-agbanwe ihe nzacha ahụ otu ugboro n'afọ na akpụkpọ ahụ kwa afọ abụọ ọ bụla. Ihe nzacha 2 ahụ ruru € 4 ruo 14. Ihe nchacha ahụ na-efu m € 16, ọ bụ ezie na e nwekwara site na € 145, ihe dị iche bụ ogo nke akụrụngwa na nkwado na hoses, mana mmiri na-apụta dị ka nke ọma. Tụkwasị na nke a, ọ dị mma ịzụta onye nyocha mmiri iji hụ PPM (ọ na-efu ihe dị ka € 90), uru ga-adị gburugburu 19ppm.
Ozugbo nchekwa dị mma. Ezigbo ezinụlọ nwere ike iji ite 8L kwa ụbọchị 1 ma ọ bụ abụọ. Nke ahụ pụtara € 2 (1,45L Fonteide) * 8 ụbọchị = € 365 / afọ + mmetọ plastik oge ọ bụla anyị tufuru karama… ..
Azụrụ m ya iji zere imetọ ọzọ, mana ọ bụkwa eziokwu na ọ na-enye ndụ dị mma.
Zaghachi Aaron Musk
Portillo nke German dijo
I meela nke ukwuu maka ịgwa anyị gbasara ahụmịhe gị Aarón, ọ doro anya na-enyere ọtụtụ ndị mmadụ aka inye ha nkwalite dị ha mkpa iji bido n'ụwa nke mkpocha mmiri.
Zaghachi Germán Portillo
Ndewo, ajụjụ. Olee mgbe e bipụtara isiokwu a?
Igwe ọkụ na-acha ọkụ ọkụ na teknụzụ ọhụrụ ya
Egweri karama plastic